Gabe Deem - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်က "ဘာမှထူးဆန်းသောလေ့လာမှုမှာလူငယ်များဘာသာရပ်များ '' ED ရှင်းလင်းချက်ကျန်ရှိနေသေးသော" က
Gabe Deem ၏“ ထူးခြားသောလေ့လာမှုတွင်အဘယ်အရာမျှတက်တက်ကြွကြွမရှိ - လူငယ်ဘာသာရပ်များ၏ ED ကိုရှင်းလင်းချက်မရှိပါ
UPDATE: ဇွန်လ 11, 2015: တစ် ဦး ကရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD အားဖြင့် 2015 ခုနှစ်
UPDATE: ဇွန်လ, 2015: Prause & Pfaus ကိုဝေဖန်မှု တုံ့ပြန်ချက် ရစ်ချတ် Isenberg ရဲ့စာမှ
UPDATE: သြဂုတ်လ 5, 2016: အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များအားဖြင့် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
UPDATE: လုပ်နေဆဲ: မြင် ဒီစာမျက်နှာ လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပြpornနာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလေ့လာမှုပေါင်း ၁၁၀ ကျော်အတွက်ဖြစ်သည်။
YBOP Comments (နှင့်မွမ်းမံမှုများ):
အောက်ဖော်ပြပါ Gabe Deem ၏ဝေဖန်မှုသည်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သော်လည်း YBOP သည်မှတ်ချက်ပေးရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ ဒီစာရွက်ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းက နီကိုးလ် Prause & Jim Pfaus သည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သည် ဒီဟာကို ED ရောဂါရှိတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်လေ့လာမှုမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်တမ်းလေ့လာမှုမဟုတ်ဘူး။ အဓိကရေးသားသူကသူမ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှု (၄) ခုမှအချက်အလက်များကိုခိုးယူခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ပါသောအချက်အလက်များသည်အခြေခံလေ့လာချက်လေးခု၏အချက်အလက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဤရွေ့ကားသေးငယ်သောကွာဟချက်မဟုတ်, plugged မရနိုငျသောအပေါက်ပေါက်။ ဥပမာအားဖြင့်စာရေးသူမှအကြောင်းအရာ ၂၈၀ ကိုပြောဆိုသည်။ သို့သော်အမျိုးသား ၄၇ ဦး သာအခြေခံလေ့လာမှုများတွင် erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ဂရပ်များရှိဂဏန်းများသည်ဘာသာရပ်၏အမှန်တကယ်အရေအတွက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ငါတို့အားလုံးအားနှိုးဆွမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အပြာရုပ်ရှင်ကားများကြည့်သည်ကိုပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်မမှန်ပါ။
ဘာသာရပ်များ၏စိုက်ထူမှုများသည်အတော်အတန်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောသော်လည်းလူငယ် ၄၇ ယောက်အတွက်ပျမ်းမျှ erectile function ကိုရမှတ်များသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ ဘာကြောင့်လဲလို့သုတေသီတွေကမမေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲသူများမပါဝင်ပါ။ ကျနော်တို့ကအားနည်းချက်တွေ, မတူကွဲပြားမှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူသွားဆက်လက်နိုင်ပေမယ့်အားလုံး Gabe ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ The လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ် (ဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောတဦးတည်း၏မိဘဂျာနယ်) လုပ်ဖို့ရှင်းပြအချို့သောအလေးအနက်ရှိပါတယ်!
ဂျင်မ် Pfaus လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်၏အယ်ဒီတာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်သုံးစွဲသတိပြုပါရန်၎င်း၏အရေးကြီးသော စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုတိုက်ခိုက်နေ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အယူအဆ။ co-စာရေးဆရာ နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နယူးလေ့လာမှုတစ်ခုဖယောင်းရုပ် Banana [အတုအသီး] ဖြစ်ပါတယ် Linda Hatch ပါရဂူဘွဲ့အားဖြင့်
နယူး ED အပေါ်သုတေသနနှင့် Porn အသုံးပြုမှုအပြီးအပြတ်ကောက်၏နာရီ ရော့ Weiss နှင့် Stefanie Carnes အားဖြင့်
ဤစာတမ်း၏ဒုတိယစာရေးဆရာ, ဂျင်မ် Pfaus, အတွင်းတွေ့ရှိချက်များကိုဂေါ် ဤတီဗီအင်တာဗျူး။ Pfaus အဆိုပါလေ့လာမှု Lab ထဲမှာစိုက်ထူအကဲဖြတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မမှန်ပါဘူး! လေ့လာမှုကနေတစ်ဦးကကိုးကား:
"အဘယ်သူမျှမဇီဝကမ္မလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန် data တွေကိုယောက်ျားရဲ့ Self-အစီရင်ခံအတွေ့အကြုံရထောက်ပံ့ပေးရန်ထည့်သွင်းခဲ့သည်င။
: အင်တာဗျူးမှာတော့ဂျင်မ် Pfaus အပါအဝင်အများအပြားမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များ, လုပ်
"ကျနော်တို့ Lab ထဲမှာတစ်ခုစိုက်ထူရဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များ၏ဆက်စပ်မှုကြည့်ရှု'နှင့်
"ကျနော်တို့ကိုသူတို့အိမ်မှာကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏနှင့်အတူတစ် linear ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ဥပမာသူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူရသော latency ပိုမြန်။ "
သို့သျောလညျးဤစာတမ်းတွင်အတူတကွ cobbled ဓာတ်ခွဲခန်းရှိစိုက်ထူခြင်းအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုခဏတာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ရဲ့“ နှိုးဆွခြင်း” ကိုသူတို့ရဲ့စာမေးပွဲမှာ (erectile function မဟုတ်ပဲ) သာလျှင်စာတမ်းကနေယောက်ျားလေးတွေကိုသာမေးခဲ့တယ်။ ဘာသာရပ်အရေအတွက်သည် ၂၈၀ ဖြစ်သည်ဟု Pfaus ကမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ erectile လုပ်ဆောင်ချက်တွင်မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ရန်ဘာသာရပ် ၄၇ ခုသာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤစာတမ်းသည်အခြေခံသည်ဟုဆိုသောအခြေခံလေ့လာမှုလေးခုတွင်ဘာသာရပ်စုစုပေါင်း ၂၃၄ ခုသာရှိသည်။ အဆိုပါဝါဒဖြန့်စက်အပြည့်အဝအင်အားစု၌တည်ရှိ၏။
In ဒီရေဒီယိုအင်တာဗျူး နီကိုးလ် Prause လည်း မဟုတ်မမှန်စိုက်ထူသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်တိုင်းတာခဲ့ပြောဆိုထားသည်။ ပြပွဲကနေအတိအကျကိုးကား:
“ လူတွေကများသောအားဖြင့်သူတို့အိမ်မှာ erotica ကိုကြည့်ကြတယ် ပိုမိုအားကောင်း erectile တုံ့ပြန်မှုများ အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမလျှော့ရ။
ဒါမမှန်ဘူး။ Prause သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စက္ကူကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာဖော်ပြထား:
ဘယ်နေရာမှာအတွက် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 ဒါမှမဟုတ်4အခြေခံစာတမ်းများ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများဓာတ်ခွဲခန်းအစီအမံဖော်ပြခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်အစီရင်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်တရားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ။
update4(2019):
သတင်းအစီရင်ခံစာများ Jim Pfaus ကိုမိန်းကလေးငယ်များနှင့်မသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုလုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုခြယ်သပါ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
"ဒီရင်းမြစ်တွေကသူတို့ကျောင်းသားတွေနဲ့သင့်တော်တဲ့နယ်နိမိတ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါမောက္ခတစ် ဦး ရဲ့ရုပ်ပုံကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်"
Pfaus ၏ကျောင်းသားများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၊ ၎င်းသည်သူ၏သင်ကြားမှုနှင့်သူ၏ neurobiology သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိ၊ သူသည်သူ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖြစ်စေ၊
“ ဘွဲ့ရကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုသည် Concordia ရဲ့စိတ်ပညာပါမောက္ခတော်တော်များများကိုချဉ်းကပ်ပြီးဌာနရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ကိုယူခဲ့တယ်။ သူတို့ကသူသင်ကြားပေးသောအတန်းများတွင်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများနှင့် Pfaus ၏လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစာဖြင့်ရေးသားထားသည်။
Pfaus သည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေရာချခံခဲ့ရပြီးနောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတက္ကသိုလ်မှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ Pfaus ၏အမြီးအမောက်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လိင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု၏တည်ရှိမှုကိုနာတာရှည်နာကျင်စေသည်။
GABE 'S အခိုင်အမာ PRAUSE & PFAUS, 2015
3 / 12 / 2015 Published
မူရင်း Critique သည်မှ Link ကို: “ သံသယဖြစ်ဖွယ်လေ့လာမှုတွင်ဘာမျှမတက်စ - လူငယ်ဘာသာရပ်များ၏ ED ကိုရှင်းပြရန်မလွယ်ကူခဲ့”
Update ကို: အပေါ်လေ့လာချက်တွေနဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းပြောဆိုဂါကိုနားထောင် မိန်းကလေးလားရေဒီယို
လေ့လာမှုတစ်ခုအရညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် အကယ်၍ သုတေသီများသည် porn-induced ED (PIED) ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအမှန်တကယ်စုဆောင်းမိလျှင်၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်စပြုခွင့်ပြုပါ။ ဒီလေ့လာမှုကမပြုလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒီဇိုင်းနိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့် porn ဟာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့အတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေမဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။
ဒီလေ့လာမှုကဘာကြောင့် PIED ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးလား။ ၎င်းသည်မလုပ်သည့်အရာနှင့်၎င်းသည်လုပ်ခဲ့သည့်အရာများတွင်များစွာသောအားနည်းချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုလေ့လာမှု မ ပြုပါ:
၁။ ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသားတွေကိုမစစ်ဆေးပါ ဝေဖန်ခံရ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏။ လေ့လာမှုတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးများသောညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်နားမလည်သော ED (ဆိုလိုသည်မှာအော်ဂဲနစ်နှင့်နိမ့်ကျသောပြproblemsနာများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်အမျိုးသားများ) ကိုမစစ်ဆေးပါ။ ညစ်ညမ်းသော ED လိင်အင်္ဂါများကိုညစ်ညမ်းစေသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာမှုလည်းမရှိပါ။ တကယ်တော့သုတေသီများမှာသူတို့၌ erectile function ကိုပြproblemsနာများရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သူသူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမပေးခဲ့ပါဘူး IIEF [erectile-function ကို] မေးခွန်းလွှာ (နောက်ပိုင်း) ။ သို့သော်လည်းစာရေးသူ porn-သွေးဆောင် ED ၏ non-တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝေးရောက်ရှိကောက်ချက်ဆွဲပါ။
2) ညစ်ညမ်းသောယောက်ျားစွဲခြင်းကိုယောက်ျားများမလေ့လာပါ, သို့မဟုတ် "လေးလံသော" ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုပင်။ Non-compulsive အသုံးပြုသူများ။ လေ့လာမှု၏နိဂုံးမှ
"ဒီဒေတာ hypersexual လူနာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး ရလဒ်များကိုသာမန်၊ ပုံမှန် VSS အသုံးပြုသောအမျိုးသားများအတွက်သာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဆိုလိုသည်။ ”
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း - လေ့လာမှုတွင်“ လိင်စိတ်နှိုးဆွသူများ” မပါ ၀ င်ပါ။ hypersexuals များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာတာရှည် porn-induced ED နှင့်အမျိုးသားများသည် porn စွဲသူများဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူလူနည်းစုသည်စွဲလမ်းပုံမပေါ်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။
မသာဒီလေ့လာမှုမ မဟုတ် နာတာရှည် ED နှင့်အတူယောက်ျားဆန်းစစ်ကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲချန်လှပ်ထားသည်။ တူသောအဘယ်အရာကိုမျှ မဟုတ် သငျသညျသက်သေအထောက်အထားများကိုရှာဖွေချင်ကြဘူးလျှင်တစ်ခုခုကြည့်!
3) အဆိုပါကောလိပ်အသက်အရွယ်ဘာသာရပ်များအကြောင်းမေးမခံခဲ့ရပါ porn အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်း! အဆိုပါဘာသာရပ်များအဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, မျှသာရက်သတ္တပတ်လေ့လာမှုမပြုမီ porn ကို အသုံးပြု. စတင်ပါပြီနိုင်ကြောင်း, သို့မဟုတ်လေ့လာမှုနှစ်ပေါင်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကောက်ယူခဲ့သည်ရုံမတိုင်မီသူတို့ porn ကိုကြည့်နည်းလမ်းတွေတက်ပေးပြီနိုင်ဘူး။ တချို့ကအသက် 10 မှာစတင်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်၏သူတို့ရဲ့ဒုတိယနှစ်များတွင်စတင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲပြီးခဲ့သည့်လကသူတို့ရဲ့ရည်းစားအတူတက်ချိုးကြပြီနိုင်ကြောင်း, ယခုမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်များမှာနိုင်တယ်။
4) အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအကဲဖြတ်မထားဘူး အမှန်တကယ်စိုက်ထူ အသုံးပြုမှုနာရီစပ်လျဉ်း, ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအရာကိုဆန့်ကျင်.
လေ့လာမှု တောင်းဆိုချက်များ လူတို့သညျသူတို့အခြို့သောညစ်ညမ်းပြသခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်သူတို့နှိုးဆော်ခြင်းဘယ်လိုတစ်ခုတည်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ (အောက်တွင်ပိုပြီး) ။ လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်အဖြစ်,
မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ် porn စွဲမပါဝင်ခဲ့ပါ
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု” ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ (အထင်မြင်မှားစေသောခေါင်းစဉ်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်)
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိုးပမ်းရန် (porn-သွေးဆောင် ED အဘို့စမ်းသပ်ဖို့လမ်းကို) ယောက်ျားမမေးခဲ့ပါ
Erectile လည်ပတ်မှုနောက်ဆုံးတွင်တိုးတက်မှုရှိမရှိသိနိုင်ဖို့ယောက်ျားများကို porn မဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါ။
အသက်အရွယ်ယောက်ျားတွေ porn, porn အမျိုးအစား, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုတင်းမာမှုကို အသုံးပြု. စတင်နှစ်သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မမေးခဲ့ချေ။
နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် anorgasmia အကြောင်းကို (PIED မှရှေ့) မမေးခဲ့ပါ
အဘယ်အရာကိုလေ့လာမှု တောင်းဆိုချက်များ လုပ်ရန်:
ဒီ jumbled ဒေတာ-သုပ်ပင်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့ရွေးကောက်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူစစ်မှန်သောလေ့လာမှုမဟုတ်ဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများနီးပါးဆီလျှော်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအစား, စာရေးဆရာ Prause ဦးဆောင်လမ်းပြ တောင်းဆိုချက်များ ဤ ED“ လေ့လာမှု” ကိုတည်ဆောက်ရန်သူမ၏အဟောင်းလေ့လာမှုလေးခု၏ cannibalized bits နှင့်အပိုင်းအစများရှိသည်။ သို့သော်ထိုလေ့လာမှု (၄) ခုသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် porn အသုံးပြုမှုနှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုအကြားဆက်စပ်မှုများကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ပိုဆိုးသည်မှာဤလေ့လာမှု (၄) ခုမှစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်ဤ ED လေ့လာမှုအတွက်အခိုင်အမာအချက်အလက်များနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ လာမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်က“ ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကို peer-review ဘယ်လိုကမ္ဘာပေါ်မှာရောက်ခဲ့တာလဲ” ဟုသင်မေးလိမ့်မည်။
ငါကှာဟ, ပျက်ကွက်ခြင်း, လက်လှည့်အလုပ်စာရေးသူလေ့လာစူးစမ်းခြင်းမပြုမီ, သင်လေ့လာမှုအပေါ်အနည်းငယ်အခြေခံလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဓိကအားဖြင့်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအသုံးပြုခြင်း (ပျှမ်းမျှအသက် 23), လေ့လာမှုများအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့အခိုင်အမာ:
အချို့သောဘာသာရပ်များသည်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ခွဲခန်းတွင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ် ) စိုက်ထူအကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်း,
အချို့သောဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းသောအပတ်စဉ်နာရီအသုံးပြုမှုနှင့်အချို့သောအကြောင်းအရာများအပေါ်ရမှတ်များ နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းများ Erectile ရာထူးအမည် (IIEF) ။
အထက်ဖော်ပြပါ ၁ နှင့် ၂ အတွက်စာရေးသူ၏တောင်းဆိုမှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
တစ်ပတ်ကို porn ၏2+ နာရီကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်နိုးထရမှတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (6 / 9) porn အသုံးပြုမှုနှစ်ခုနိမ့်အမျိုးအစားထက် (5 / 9) ။
သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုအကြားမတွေ့ မနည်းမများသော အဆိုပါ IIEF အပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile function ကိုရမှတ်များ။
ငါအရေအတွက်ကို 1 နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေအတွက်ကို2အောက်ရှိတောင်းဆိုမှုများခွဲစိတ်။ အရေးဆိုမှုအသီးသီးနှင့်အတူငါပြန်ကြောင်းယခုတွင်ငါသည်အသေးစိတ်လိမ့်မည်သည့်ကှာဟနှင့်ပျက်ကွက်ဖို့ hark ။
လေ့လာမှုကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ - ပျောက်ဆုံးနေသောဘာသာရပ်များ၊ ချန်လှပ်မှုများ၊ ကွာဟမှုများနှင့်မထောက်ခံသည့်တောင်းဆိုမှုများ
1) က Starting Point သို့:
ငါတို့သည်ဤ ED လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များနှင့်အချက်အလက်ပြီးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြရာလေးကတခြားလေ့လာမှုများ, ရယူထားခဲ့ပြောသည်နေကြသည်:
“ လူနှစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်ဟာပထမဆုံးစာရေးဆရာမှပြုလုပ်တဲ့လေ့လာမှုလေးမျိုးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဤအချက်အလက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည် [33-36]"
လေးပါးလေ့လာမှုများ (၏မှတ်ချက်ချ, အဘယ်သူအားမျှအဖြစ်လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4) porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်။ တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုသာ 47 ယောက်ျားတို့အတွက် erectile လည်ပတ်ရမှတ်များ, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းဘာသာရပ်၏ 2) နံပါတ်: ခဲရေးသားသူ Prause Tweet ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သင်သိရ 280 ဘာသာရပ်များ သူတို့မှာ“ အိမ်မှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။ သို့သော်အခြေခံလေ့လာချက်လေးခုသာပါဝင်သည် 234 အထီးဘာသာရပ်များ။ ၂၈၀ သည်ဤလေ့လာမှုဇယား ၁ တွင်“ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ဆက်ဆံဖက်မိတ်ဖက်များ” အဖြစ်ဖော်ပြသည့်ဘာသာရပ်များအရေအတွက်အဖြစ်တစ်ကြိမ်သာတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းနံပါတ် ၂၆၂၊ ၂၇၂၊ ၂၁၂ နှင့် ၁၂၇ တို့လည်းပါဝင်သည်။ သို့သော်ဤနံပါတ်များသည်အခြေခံလေ့လာချက် ၄ ခုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ သာ 47 ယောက်ျား ယင်းစိုက်ထူမေးခွန်းလွှာကိုယူ။ သူမ၏ tweet ဆန့်ကျင်, erectile function ကိုများအတွက်ပျမ်းမျှရမှတ် (21.4) စတုရန်းဟာပျော့ ED အမျိုးအစားအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤ 47 လုလင်တို့သည်ထားလေ၏။ သည်းခံပါ။
ကွာဟမှု 1: 46 ဘာသာရပ်များ ဘာသာရပ်များ၏အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကို (စဉ် 280 ဘာသာရပ်များ၏ပြောဆိုချက်ကိုအတွက်ဘယ်နေရာမှာမှထွက်ပေါ်လာ234) ကိုပညာရေးလေ့လာမှုမှာဘယ်နေရာမှာရှာတွေ့သည်။
ကွာဟမှု 2ဇယား ၁ ရှိအကြောင်းအရာနံပါတ်များ၊ ၂၈၀၊ ၂၆၂၊ ၂၇၅၊ ၂၁၂ နှင့် ၁၂၇ - အခြေခံလေ့လာမှု (၄) ခုမှမည်သည့်အရာမျှမကိုက်ညီပါ။
မကိုက်ညီသည့်ပြောဆိုချက်ကို: လေ့လာမှုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း Prause tweets 280 ဘာသာရပ်များ.
ပျောက်ဆုံးနေဖြေ - သူမဘာသာရပ်များအတွက်“ ၂၈၀” ဆိုတဲ့နံပါတ်ကို Prause ဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြပါ။
မကိုက်ညီသည့် တောင်းဆိုမှု2: Prause သူတို့သည်နောက်ပြဿနာများရှိခဲ့ Tweet လုပ်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့စိုက်ထူရမှတ်ပျမ်းမျှ ED ဖော်ပြသည်။
3 အဆိုပါ IIEF ယူသူကိုဘာသာရပ်များ၏) နံပါတ် (erectile-function ကိုစမ်းသပ်): အဆိုပါပညာရေးလေ့လာမှုဆိုပါတယ် 127 ယောက်ျား အဆိုပါ IIEF (pg 11 လည်းပြောပါတယ်ယူ 133) ။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းသာလေးပါးလေ့လာမှု IIEF ရမှတ်ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် ယူ. သူကိုဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်ခဲ့သည် 47။ အဘယ်မှာရှိ Prause ပုရခဲ့ပါ အပို 80 ယောက်ျား? သူမရှင်းပြမထားဘူး ဒီလေ့လာမှုကဘာသာရပ်ပေါင်း ၂၈၀ ၏ erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုမလေ့လာခဲ့ဘူး၊ ၂၃၄ ဦး လည်းမဟုတ်၊ ၁၂၇ ဦး တောင်မှမလေ့လာခဲ့ပါဘူး။
ကှဲပွားခွားနားခကျြ: လေ့လာမှုဆိုပါတယ် 127 ဘာသာရပ်များ IIEF ကိုယူခဲ့ပေမယ့်တကယ်ကိုပါပဲ 47.
မကိုက်ညီသည့်ပြောဆိုချက်ကို: Prause tweets ကြောင်း 280 ဘာသာရပ်များ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
ပျောက်ဆုံးနေ: အလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် 127 အပေါ်မဆိုကုန်ကြမ်းဒေတာ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့4သကဲ့သို့တူညီ 47 ဘာသာရပ်များအဘို့အ 80) ပျမ်းမျှ IIEF ရမှတ်: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသာ တဦးတည်းလေ့လာမှု, နှင့် 47 ယောက်ျားတစ် IIEF ရမှတ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှုသည်မေးခွန်း ၁၅ ခုပါသော IIEF အတွက်သာရမှတ်ကိုသာတင်ပြခဲ့သည်၊ ယခုလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသည့်မေးခွန်း ၆ ခုပါသော“ စိုက်ထူမှုအဆင့်အတန်း” မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ကလာသည်ဖြစ်စေ ၆- မေးခွန်းစိုက်ထူမှု subscale အတွက်ပျမ်းမျှရမှတ်သည် 21.4နှင့် "ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိ ED လေ့လာမှု လည်း ပျမ်းမျှ IIEF ရမှတ်မလုပ်ပဲ 21.4 အတွက် တစျခုလုံးကို 127။ ပွောဆို ဘာ? ပျမ်းမျှ ၂၁.၄ ပျမ်းမျှယောက်ျား ၄၇ ယောက်နှင့်“ စာရင်းသွင်း” ခံရသည် 127 21.4 ပျမ်းမျှ။ ဤအကြောင်းကိုဆိုလိုသည် 80 ပျောက်ဆုံးနေယောက်ျား ဖို့လည်းပျမ်းမျှအားရှိခဲ့ 21.4။ ဖြစ်ပျက်သောဖြစ်နိုင်ခြေကဘာလဲ?
မယုံနိုင်စရာတိုက်ဆိုင်မှု: အဆိုပါများအတွက်ပျမ်းမျှ IIEF ရမှတ်များ 47 ယောက်ျား များအတွက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ရမည် 80 ယောက်ျား.
အထင်မှားစေ: ပျမ်းမျှရမှတ် (21.4) "ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဖော်ပြသည်လေ့လာမှုအရအမျိုးသားများသည်“ အတော်လေးကောင်းသော erectile function” ရှိကြောင်း (အသက် ၇၀ အရွယ်အမျိုးသားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ဖြစ်နိုင်သည်။
ပျောက်ဆုံးနေ: မူရင်းလေ့လာမှုအပေါ်စိုက်ထူ Sub-စကေးများအတွက် IIEF ရမှတ်များ။
ပျောက်ဆုံးနေ: မည်သည့်ဘာသာရပ်များအတွက် IIEF ရမှတ်များ။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကြမ်းဒေတာ, အဘယ်သူမျှမကြဲဖြန့်ကွက်မရှိပုံပြမျဉ်း။
နာရီ / ရက်သတ္တပတ် porn ကြည့်ဘို့ဘာသာရပ်များ၏ 5) နံပါတ်: အဆိုပါပညာရေးလေ့လာမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဒေတာရှိသည်ဖို့မလုပ်ပဲ 136 ယောက်ျား။ အဲဒီအစား, သာ 90 ဘာသာရပ်များ,2လေ့လာမှုများကနေတစ်ပတ်ကိုကြည့်ရှုနာရီသတင်းပို့ပါ။ စာရေးသူအဘယ်မှာတက် conjure ခဲ့ပါ 46 အပိုဘာသာရပ်? ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှု IIEF ရမှတ်များနှင့်အတူတစ်ပတ်ကို porn ကြည့်ရှု၏နာရီပတျသကျမှမလုပ်ပဲ, ဒါပေမယ့် 90 ယောက်ျား (နာရီ / ရက်သတ္တပတ်) မကိုက်ညီပါ 47 ယောက်ျား (IIEF ရမှတ်များ) ။
ကွာဟမှု 1: လေ့လာမှုအဘို့အညစ်ညမ်း data တွေကိုကြည့်ရှုနာရီ / ရက်သတ္တပတ်မလုပ်ပဲ 136 ဘာသာရပ်များ, ဒါပေမယ့်တကယ်ပဲ 90 ။
ကွာဟမှု 2: လေ့လာမှု IIEF ရမှတ်များနှင့်အတူကြည့်ရှုနာရီ / ရက်သတ္တပတ် porn ပတျသကျမှမလုပ်ပဲ, ဒါပေမယ့် 90 မတူဘူး 47
မကိုက်ညီသည့်ပြောဆိုချက်ကို Prause tweets N ကို = 280, ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ N ကို = 47.
ပျောက်ဆုံးနေ: အဆိုပါဘာသာရပ်များအဘို့အကြည့်ရှုအားပေးနာရီ။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကြမ်းဒေတာ, အဘယ်သူမျှမကြဲဖြန့်ကွက်မရှိဂရပ်, ယုတ်သို့မဟုတ် Standard သွေဖည်ခြင်းမရှိ။
ပျောက်ဆုံးနေ: porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ပတ်လျှင်ကြည့်ရှုအားပေးနာရီအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါတရားဝင်ဒေတာ။
6) လိင်စိတ်နိုးထ ratings: စာမကျြနှာပျေါတှငျစာရေးဆရာများယောက်ျားတစ်ဦးစကေးအပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ rated ကြောင်းဖော်ပြ 8 1 မှ9မှ.
“ ယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှုန်းကို“ လုံးဝမဟုတ်” မှ ၉ အထိ“ အလွန်အမင်း” အထိဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။
အဖြစ်မှန်မှာတော့ သာ 1 တစ်အသုံးပြုသော4အခြေခံလေ့လာမှု 1 စကေးမှ9။ တစ်ခုက ၀ မှ ၇ ခုအတိုင်းအတာတစ်ခု၊ ၁ ကနေ ၇ အထိစကေးကိုသုံးတယ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဖော်ပြဘူး။ စကားမစပ်လေ့လာမှုကဓာတ်ခွဲခန်းတွင်တိုင်းတာမှုများကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်း။ ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာမှုကစာနယ်ဇင်းများနှင့်စာဖတ်သူများအားလမ်းလွဲစေခဲ့သည်။ ဒါမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး အကောင်းဆုံးမှာရမှတ်များကတပ်မက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုသာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကှဲပွားခွားနားခကျြ: ED စက္ကူပေါ်ရှိ Arousal ချိန်ခွင်များသည်အခြေခံလေ့လာမှု ၃ ခုမှနှိုးဆွသည့်အတိုင်းအတာနှင့်မကိုက်ညီပါ။
အထင်မှားစေ: ဒီလေ့လာမှုကလုပ်ခဲ့တယ် မဟုတ် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု" သို့မဟုတ် erectile တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်။
လိင်စိတ်နိုးထ ratings အတှကျအသုံးပွု 7) stimulus။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီနှင့်တစ်နာရီအကြားလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှုန်းသည်အနည်းငယ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူများကကြီးမားသောသဘောတူညီမှုကိုပေးသည်။ လေ့လာမှုကောင်းတစ်ခုသည်ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက်တူညီသောနှိုးဆွမှုကိုအသုံးပြုသည်မဟုတ်လော။ ဒါပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဒီလေ့လာမှုတော့မဟုတ်ဘူး။ အခြေခံလေ့လာမှု ၄ ခုတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုက3မိနစ်ရုပ်ရှင်တပါးလေ့လာမှုတစ်ဦးကိုသုံး 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်သုံးတလေ့လာမှု နေဆဲပုံရိပ်တွေကို။ ကောင်းပြီ ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာဤလေ့လာမှုတွင် Prause ကလေ့လာချက် ၄ ခုသည်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်များကိုသုံးသည်ဟုဆိုသည်
လုံးဝမှားယွင်းသော! သာ2လေ့လာမှုများ နှင့် 90 ယောက်ျားရမှတ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 47 ကြည့်ရှုအားပေးသူတို့အားယောက်ျား၏ သာရုပ်ပုံများ အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများ, မဟုတ်ရုပ်ရှင်၏။
ကွာဟမှု 1: လေးခုကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ, နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏3ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ။တဦးတည်းရပ် ..but ။
ကွာဟမှု 2: တို့သည်အအောက်ကဂရပ်များတွင် 136 ဘာသာရပ်များသို့သော်လည်း, သာ 90 ဘာသာရပ်များ အမှန်တကယ်အခြေခံလေ့လာမှုတွင်မဆို porn / ရက်သတ္တပတ်၏နာရီသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
ကွာဟမှု 3: အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထစကေးဖြစ်ပါသည် 1 -7အောက်ကပုံပြမျဉ်း, သေးလေ့လာမှုအတွက်စကေးကဆိုသည် 1 -9(များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြရန်အခိုင်အမာခဲ့သော 1 အဆိုပါ4လေ့လာမှုများ၏)
မကိုက်ညီသည့်ပြောဆိုချက်ကို: Prause ဇာတ်ကားတွေကိုအသုံးပြုအားလုံး4လေ့လာမှုများဆိုပါတယ်။
ဘာသာရပ်များကြည့်ရှုသည်ဤ porn ၌ရှိသကဲ့သို့တူညီအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ အရေအတွက်ကအထက်5နှင့်အရေအတွက်ကို 1 အောက်ရှိဂရပ်၌တည်၏။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေးဆိုမှု 136 ယောက်ျားဒါပေမယ့်ဒေတာမဟုတ်ရင်ကပြောပါတယ်။
8) အချက်အလက်မရှိပါ IIEF ရမှတ်များနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု correlating: ဒီလေ့လာမှုကနေခေါင်းစဉ်သတင်းကဘာလဲ? ရေးသားသူများက erectile လုပ်ဆောင်မှုရမှတ်များနှင့်တစ်ပတ်ကိုကြည့်ရှုသည့် porn နာရီများအကြားဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ သတင်းကြီးတွေ၊ သူတို့ပေးသောအရာများအားလုံးသည် ၀ ါကျအနည်းငယ် (စာမျက်နှာ ၁၁-၁၂) ဖြစ်ပြီးဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းကိုစိတ်ချစေသည်။ ဒေတာမရှိဂရပ်မရှိရမှတ်များ, ဘာမျှမ။ ရန်သာ allusion ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်များမှာ 127 ဘယ်သူကို၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် 80 ယောက်ျား,,3နှင့်အထက်4အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုမှ:
အမျိုးသားများ (N = 127) သည် Erectile လည်ပတ်မှုကောင်းမွန်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် (ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအညွှန်းကိန်း၏စုစုပေါင်းစကေးရမှတ်နှင့် erectile subscale ရမှတ်များသည်ပျမ်းမျှသီတင်းပတ်အတွင်းကြည့်ရှုခဲ့သော VSS နာရီများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ”
ပျောက်ဆုံးနေ 1: မဆိုဂရပ်သို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို / ရက်သတ္တပတ်နှင့် IIEF ရမှတ်များကြည့်ရှုအားပေး porn ၏နာရီအကြားဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း။
ပျောက်ဆုံးနေ 2: အချက်အလက်အကြမ်း။ မဆိုဒေတာ။
ကွာဟမှု: သူတို့ကမှပေါ်လာ ပြောဆိုချက်ကို 127 ဘာသာရပ်များသို့သော်လည်း, သာ 47 လူတို့သညျ IIEF ယူ.
အထင်မှားစေ: အမျိုးသားများဟုပြောဆိုခြင်းသည် Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအတော်အတန်ကောင်းမွန်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ပျမ်းမျှအား နိုင်ပြီ (21.4) အပျော့စား ED ဖော်ပြသည်။
ED လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခြေခံလေ့လာမှု ၄ ခုနှင့်လုံးဝမတွေ့ရသောဘာသာရပ် ၈၀ နှင့်လုံးဝမရှိသောကြောင့်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူ၏စကားလုံးကိုကျွန်ုပ်မယူပါက ကျေးဇူးပြု၍ ခွင့်မလွှတ်ပါနှင့်။ ဤအချက်ကိုသရုပ်ဖော်ရန်၊ လေ့လာမှု၏နိဂုံးသည်မတိကျသောစာကြောင်းများဖြင့်စတင်သည်။
"အလားတူလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးသားနမူနာများ (N = ၂၈၀) မှအချက်အလက်များကို စုစည်း၍ VSS စားသုံးမှုသည် erectile ပြproblemsနာများနှင့်ဆက်နွှယ်သည်ဟုအယူအဆကိုစမ်းသပ်ရန်စုစည်းထားသည်။ "
"N = ၂၈၀": Nope, သာ 47 လူတို့သညျ IIEF ယူ
"စုစည်းခဲ့ကြသည်": ဘာမျှအခြေခံ4လေ့လာမှုများကိုက်ညီ
တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာမှုဘယ်နေရာမှာထံမှပေါ်ထွန်းဘာသာရပ်များ, နံပါတ်များ, နည်းစနစ်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူဤကဲ့သို့သောဖြစ်ပြီး, အခြေခံလေ့လာမှုများအားဖြင့်မထောက်ပံ့။
သုတေသီတွေရဲ့အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ရအောင် တောင်းဆိုမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ
NUMBER ကို 1: porn အသုံးပြုမှုအပတ်စဉ်နာရီနှင့် Self-အစီရင်ခံ arousal အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်
အဆိုပါသုတေသီများထားရှိရန်တောင်းဆို 136 သင်တန်းသားများ အပတ်စဉ် porn အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးသုံးအုပ်စုများအတွက် (အောက်တွင် graph) ။ ကွာဟမှု: အပတ်စဉ် porn အသုံးပြုမှုကိုသာ 90 လေ့လာမှုများအတွက်2ဘာသာရပ်များများအတွက်အစီရင်ခံသည်။
လူတို့သညျ Lab ထဲမှာ porn နှင့်လေ့လာမှုကိုပြသခဲ့ကြသည် ပြောဆိုထားသည် သူတို့ arousal rated 1 မှ9တစ်စကေးကိုသုံးနိုင်သည်။
ကွာဟမှု 1: အဆိုပါ 1 အခြေခံလေ့လာမှု4တစ်ခုသာအသုံးပြုခဲ့ 1 စကေးမှ9။ တဦးတည်းတဦးတည်း0စကေးတစ်ခု7အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထ ratings သတင်းပို့ကြဘူး, 1 စကေးတစ်ခု7ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကွာဟမှု 2: ပန်းသီးနှင့်လိမ္မော်သီး: တစ်ခုမှာလေ့လာမှုတစ်ခု 20 ဒုတိယရုပ်ရှင်နှစ်ခုတစ်3မိနစ်ဗွီဒီယိုကိုအသုံးပြုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘားဂရပ်ကစာရေးသူများအားနှိုးဆွမှုရလာဒ်များကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မချရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စာဖတ်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသည့်နှိုးဆော်ခြင်းကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ သုတေသီများက“ လိင်မှုနှိုးဆွမှု” နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုခြင်းသည် erectile function ကိုခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သုတေသီများက“ penile စိုက်ထူခြင်း” အပေါ်မေးခွန်းလွှာ၏ရလဒ်များကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟုဆိုသောအောက်ခြေမှတ်ချက်တစ်ခုရှိသည် ယူဆ "လိင်စိတ်နိုးထမှု" သည်တူညီသောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤအချက်သည် (လိင်မှုကိစ္စနှိုးဆွသော်လည်း၊ မိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူ။ မရနိုင်သော) porn-induced erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောယောက်ျားများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောယူဆချက်မဟုတ်ပါ။
ညစ်ညမ်းမှုနှောက်ယှက်မှုခြားနားချက်ကိုအပြန်အလှန်အနက်ဖွင့်ရန်အခြား ပိုမို၍ တရား ၀ င်သောနည်းလမ်းမှာ 'တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီခွဲ' အမျိုးအစားရှိအမျိုးသားများသည်အနည်းငယ်ပိုမိုများပြားသည်။ porn သုံးစွဲဖို့မတရားသော။ စိတ်ဝင်စားစရာသူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်များနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် .01-2 နာရီ logged သောသူထက် masturbate ဖို့ပိုအလိုဆန္ဒနှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ (လေ့လာမှုမှာပုံ 2) ။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ာင်း, (porn) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါ (ဦးနှောက်) ကို Activation နှင့်တဏှာ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ဖြစ်၏။ အသိစွဲရန်ရှေ့ပြေးနိုင်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုအပြုသဘောဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုထိန်းချုပ်သူများထက်ပိုမိုမကြိုက်သော်လည်း sensitization လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို၏အံ့သြဖွယ်ဥပမာတစ်ခုမှာတော့ကင်းဘရစ်ဘာသာရပ်များ၏ 60% ကဖော်ပြခဲ့သည် မိတ်ဖက်နှင့်အတူ arousal / erectile ပြဿနာများ, ဒါပေမယ့်မရ porn နှင့်အတူ. အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုကနေ:
ရိုးရှင်းစွာထားပါ လေးလံသော porn အသုံးပြုသူပိုမိုမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal (မတရားသော) တွေ့ကြုံခံစားသေးလည်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းသည်သူ၏“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု” / erectile function ကိုသက်သေပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပိုပြီး porn အကဲခတ်စိုက်ထူတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ် ??
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏စာရေးသူများက“ VSS ကြည့်ရှုခြင်းဟာတောင်မှဖြစ်နိုင်သည် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ " သူတို့၏အကြံဥာဏ်သည်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆန္ဒရမှတ်များ (Erectile-function ရမှတ်များမဟုတ်) အပေါ်အခြေခံသည်။ အကယ်၍ ဤ“ နှိုးဆော်ခြင်း” လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်လာလျှင်အဆိုးဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အသည်းရောင်အသားဝါဒီ ED ဖွံ့ဖြိုးလာသူများမှာညစ်ညမ်းမှုကိုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ထိုသို့သောကျဆင်းမှုကိန်းဘရစ်ခ်ျဘာသာရပ်များအစီရင်ခံတင်ပြအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင်ဆက်ဆက်, porn ကြည့်ရှုစိုက်ထူတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED သတင်းပို့သူတို့အဘို့ပြဿနာအများစု erectile function ကိုဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဖက်နှင့်အတူ။ စာရေးသူ obligingly အကြံပြုအဖြစ်ထို့အပြင်, အဲဒီမှာ porn ကြည့်ရှုသောဤလေ့လာမှုမှာအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ် porn အမျိုးမျိုး, မိတ်ဖက်နှင့်အတူ erectile function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒီမှန်ကန်သောဖြစ်လျှင်, ငါ erectile function ကိုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် 47 လုလင်တို့သည်ပိုကောင်းလားသူတို့စောင့်ကြည့်ပိုမိုညစ်ညမ်းအစီရင်ခံတင်ပြကြမည်ဟုထင်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအစား, သူတို့ကအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် "ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
သတိထားသင့်သည်မှာကင်းဘရစ်ခ်ျသုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုစုံစမ်းနေစဉ်တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာမုန်းတီးမှုကိုအသုံးပြုသူများ (CSB) နှင့် ED ရှိလူငယ်များအားပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာငယ်ရွယ်သူများအား ED ကိုစစ်ဆေးရန်ရည်မှန်းထားစဉ်ယခုလေ့လာမှုသည်ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးကိုလွဲချော်သွားသည်။
NUMBER ကို 2: အဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရမှတ်၏အပတ်စဉ်နာရီ Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်း (IIEF)
အမှုအရာကယ့်ကိုရုပ်ဆိုးရဘယ်မှာဒီနေရာကိုပါပဲ။ အဆိုပါစာရေးဆရာကပြောဆိုထားသည် 127 လုလင်တို့သည် အဆိုပါ IIEF လို့ခေါ်တဲ့မေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့တစ်ဦး 15-item ကိုစစ်တမ်း ယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏လိင်၊ တနည်းကား, ဤ Self- အစီရင်ခံရမှတ်များအတည်ပြုရန်အမှန်တကယ်လိင်တံတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်. ကှဲပွားခွားနားခကျြသာ 47 လူတို့သညျ IIEF ယူခဲ့ပါတယ်။ မှတ်စု: သူတို့သည်လည်း 11 လူတို့သညျ IIEF ယူ. စာမျက်နှာ 133 အပေါ်ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုအဆုံးသတ်ပါသလား?
အဆိုပါအမည်မသိ 59 (လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ)
ကျွန်ုပ်တို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြိုင်စကြ ၀ inာတွင်ရှိနေပြီး ၁၂၇ ယောက်သည် IIEF ကိုယူခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူ ဖော်ပြ သာ 59 မိတ်ဖက်ခဲ့ သူတို့စောငျ့ရှောကျနိုင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ ယခု erectile ကျန်းမာရေး။ ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏ erectile ကျန်းမာရေးအမှန်တကယ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် Partners ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်စေသည်။ သေး ဤအသုတေသီများ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိ erectile function ကိုနားလည်ကူညီနိုင်သူကသာပါဝင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? စာရေးသူဝန်ခံသည်အတိုင်း, လက်ရှိ erectile function ကိုအကဲဖြတ်တဲ့ partner ၏ရရှိမှုအပေါ်မူတည်သည်လို့ပဲ။
သူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသောအခါပထမဦးစွာများစွာသောငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေ erectile ကျန်းမာရေးအတွက်လျင်မြန်စွာကျဆင်းသတင်းပို့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက် (porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ) ခဏလေး။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူသတိရ erectile လုပ်ဆောင်မှုကို အခြေခံ၍“ erectile function” စစ်ဆေးမှုသည်အကျိုးမရှိပါ။
ဒုတိယအနေပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ်ယောက်ျား porn-သွေးဆောင် ED အများစုကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရှိကြောင်းသတင်းပို့ ပူးပေါင်း လိင် (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်သုတေသီများမှမကောက်ယူသည့်စာရင်းဇယားတစ်ခု) - porn နှင့်မဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်အချို့သောယောက်ျားများသည်ဤအဖြစ်အပျက်ကို“ copulatory impotence” ဟုခေါ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်, အဘယ်ကြောင့်မရှိကြပေ ပူးပေါင်း အဆိုပါ IIEF ပုလုယူသောသူသည်ယောက်ျား သာ ဘာသာရပ်များဤလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်း? စာဖတ်သူတွေအတွက်ဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကွဲစေတာလဲ။ အဆိုပါသုတေသီများကမိတ်ဖက်သင်တန်းသားများကို "ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်" သည့်အခါကြည့်ရှုခြင်းနာရီနှင့် erectile function ကိုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကသူတို့ပြောဆိုထားသည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကြောင်းကိုသူတို့ဘာမျှလေ့လာသင်ယူသို့မဟုတ်သူတို့အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံကို။ ၎င်းတို့သည် 280 သို့မဟုတ် 127 ကဲ့သို့သောပိုကြီး။ မရသည့်ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်သို့အမြဲတမ်းတိမ်းစောင်းသွားသည်။ အပြိုင်စကြာ ၀ Exာမှထွက်ပြီး shenanigans သို့ပြန်သွားပါ။
"နူးညံ့သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု"
နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် IIEF ရဲ့ "erectile function ကို" subscale။ အောက်ကဇယားမေးခွန်းများကိုနှင့်အမှတ်ပေးပြသထားတယ်။ (ကြည့်ရန် စမ်းသပ်မှုများနှင့် subscale တစ်ခုလုံးကို1 ထံမှ 30 ဤ subscale အကွာအဝေးအဘို့။ ) ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားရမှတ်များ။ နေသောလူတို့သညျအဘို့ ပြောဆိုထားသည် ဒီ 6-ကို item subscale ပြီးစီးခဲ့ပြီ, ယုတ် (ပျှမ်းမျှ) ရမှတ်သာဖြစ်ခဲ့သည် 21.4 တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှထဲက 30။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သူတို့က "ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" အတွင်းကောင်းစွာကျဆင်းခဲ့သည် အမျိုးအစား.
ဤအတောင်းပန်ပါတယ် erectile function ကိုရမှတ်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ် porn watched အဘယ်သူအားမျှဘယ်သူကို၏ 23 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားက Self-အစီရင်ခံခဲ့စိတ်ကိုထားပါ။ ဤသည်အကြံပြု ပင် non-compulsive ထုံးစံ၌ကိုလောင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, အသုံးပြုသောနာရီနှင့်အတူမသက်ဆိုင်ဘဲမူလ (အဘယ်သူမျှမ) ဆက်စပ်မှု၏နုပျိုစိုက်ထူအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းစေခြင်းငှါ.
တကယ်တော့ဤလုလင်တို့သည်ကောင်းစွာယခင်ကထူထောင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည် အများကြီးအဘို့အထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရမှတ်များ အသက်ကြီး။ 1997 ခုနှစ်, IIEF မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှကောက်ယူသည့်လေ့လာမှုများ erectile-function ကိုရမှတ်ပျမ်းမျှကြောင်းအစီရင်ခံ 26.9 (ပျှမ်းမျှအသက် 58), နှင့် 25.8 (ပျှမ်းမျှအသက် 55) ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက် porn မတိုင်မီအသက်ကြီးသောအမျိုးသားများသည်အသက် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးသည့်လူလတ်ပိုင်းအရွယ်၌ပင်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။
မဖြစ်နိုင်တိုက်ဆိုင်မှု? ဘယ်လိုတတျနိုငျသ 47 အဆိုပါ IIEF ယူသူကိုဘာသာရပ်များ (အတိအကျတူညီပျှမ်းမျှရှိ21.4) ကအဖြစ် 80 အဘယ်သူမျှမရှာတှေ့နိုငျလောကကိုလညျးဘာသာရပ်များ (21.4)?
ထိုမှတပါး, 21.4 ဖြစ်သကဲ့သို့ ပျှမ်းမျှ indeterminate အချို့ရမှတ် ( N), အချို့သင်တန်းသားများကိုများအတွက်ရမှတ် 21.4 ထက်နိမ့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုလိုသည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, SD က (စံသွေဖည်) (အကြီးစားကြီး9.8), ဒါကြောင့် erectile function ကိုရမှတ်များကျယ်ပြန့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအချို့သော "အလယ်အလတ်" နှင့် "ပြင်းထန်" erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားသို့ကျဆင်းဖွယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချက်အလက်များကိုမပေးသောကြောင့် - ကျွန်ုပ်အားပို့ဆောင်ပေးသော ...
အဘယ်ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်စာရေးဆရာများအသိစိတ်သုတေသီများလုပ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ကြဘူး ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု"ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်,"နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်ထုတ်ပေးကဲ့သို့သောဂရပ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ဒေတာအားလုံးကိုစီစဉ်? ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများစားသုံးမှုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဦး နှောက်တွင်းရှိမီးခိုးရောင်များလျော့နည်းသွားသည်ကိုစာဖတ်သူအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီ ED လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများယုတ်ရမှတ်များနှင့်ရိုးရှင်းသောဘားဂရပ်များအတွက်ဒေတာတစ် ဦး ချင်းစီဖုံးကွယ်ခဲ့တာလဲ
အဆိုပါစာရေးဆရာအပတ်စဉ် porn အသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်မှုအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့တောင်းဆိုမှုများကိုအပတ်စဉ်အသုံးပြုမှုရမှတ်များနှင့်အတူဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းအပေါ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသော်လည်း, porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တည်ရှိမှုကိုတည်ထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ယူဆချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမထောက်ခံကြောင်းကိုဆက်ကပ်။ 2011 ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်သုတေသီတွေက porn-related ပြဿနာများပတျသကျတွေ့ရှိခဲ့ မဟုတ် အချိန်နှင့်အတူသုံးစွဲညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုစဉ်တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများစွာဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနာရီနှင့် ED ပြissuesနာများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း (၎င်းတို့၏အခြားမေးခွန်းလွှာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း) သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအသစ်အဆန်း (ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ tabs များဖွင့်ခြင်းစသည်) သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်ထက် နာရီ။
ထို့အပြင်“ အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု” ရမှတ်များကိုအတိအကျမည်သို့ဆုံးဖြတ်ထားသနည်း။ အဆိုပါသုတေသီများမပြောကြဘူး။ “ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသင်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းခဲ့သလဲ။ ” သို့ဆိုလျှင်“ 2+ နာရီ” ဘင်တွင်စိုက်ထူမှုပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်ရန်အချိန်မပေးနိုင်သောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအသစ်များရှိနိုင်သည်။ နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်ကောင်း porn ကိုဖယ်ရှားဖို့မကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ခဲ့သူ porn-related ပြproblemsနာများနှင့်အတူကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသူများသည်, "0 နာရီ" ဘင်ထဲမှာဆက်စပ်မှုပို။ မဖြစ်နိုင်အောင်။
ဦး ဆောင်ရေးသားသူသည်“ အပတ်စဉ်အသုံးပြုမှု” ကိုမည်သို့တွက်ချက်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအရေးကြီးဆုံးအချက်အလက်များမှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း နှင့် အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့နှစ်ပေါင်း porn အသုံးပြုမှုနှင့်အသက် (ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်) အကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်သုတေသီများပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ၌ယောက်ျားများမကြာခဏတွေ့သောအခြားအချက်များအဘို့မိမိတို့ထိန်းချုပ်မှုပြissuesနာများနှင့်ဆက်စပ်သော: သူတို့ကပိုအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတိုးမြှင့်, မိတ်ဖက်လိင်မပါဘဲရှည်လျားသောကာလ, ဝတ္ထု porn လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အင်တာနက် porn နှင့်သာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း။
အခြေအနေများအရအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂဏန်းရှေ့နောက်မညီမှုများကြောင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါလက္ခဏာကိုစာရေးသူကထုတ်ပယ်ခြင်းသည်မလိုလားအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
စိုက်ထူကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်အခြေအနေများမှလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲမ VSS [porn] ၏ရှုထောင့်မှအေးစက်ဖြစ်လာပေမည်။ လိင်စိတ်နိုးထအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပင် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအပါအဝင်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ VSS ၏ဆက်စပ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထအများစုကြုံနေရ Partners လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနေစဉ်အတွင်းတစ်လျော့နည်းသွား erectile တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင် VSS ရှုမြင်သူကိုလူပျိုတို့လိင်သူတို့ VSS အတွက်ရှုမြင်သောအရာကိုဆင်တူ themes များနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ပူးပေါင်းကြောင်းမျှော်လင့်ထား။ မြင့်မားသောဆွမျှော်လင့်ချက်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါအညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွထားတဲ့စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်မည်မဟုတ်ပါပူးပေါင်း။
သူတို့ရဲ့အရသာပိုပြီးအစွန်းရောက် fetish porn ဖို့အချိန်ကျော်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ရှိမရှိ
အကယ်၍ သူတို့သည် porn-induced ED နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိုပါက erectile function ရမှတ်နိမ့်ကျသောလူငယ်များအား porn မပါဘဲနှင့်၎င်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းများကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူအမျိုးသားများသည်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၊ ဗီယိုဝါဒ၊ အကြောင်းအရာများကို fetish နှင့် / သို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေကမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာ porn-induced ED ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထူးလေ့လာတဲ့လေ့လာမှုမဟုတ်လို့ပဲ။
မြင့်မားမှတ်ဆီးရောဂါပါရဂူပြီးသားထိုကဲ့သို့သောအာဗြဟံသည် Morgentaler, MD ဟားဗတ် urology ပါမောက္ခနဲ့စာရေးဆရာနှင့်ကော်နဲလ် urology ပါမောက္ခနဲ့စာရေးဆရာဟယ်ရီ Fisch, MD အဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာဆီးရောဂါပါရဂူအပါအဝင် porn-သွေးဆောင် ED ၏ပြဿနာလောက်တက်ပြောပြီ။ Morgentaler ကပြောပါတယ်“ လူငယ်တွေက porn-induced ED ခံစားနေရတာကိုအတိအကျသိဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖြစ်တာမဆန်းဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်သည်လိင်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Fisch ကရေးသားခဲ့သည်။ သူ့စာအုပ်၌ The New အဝတ်အချည်းစည်းသူကအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ဒြပ်စင် - အင်တာနက်။ ၎င်းသည်“ ရံဖန်ရံခါအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းသင်၏ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ] ကျန်းမာရေးအတွက်ငရဲအတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောအရာတစ်ခုခုကိုနေ့စဉ်ရရှိနိုင်စေခဲ့သည်။ ”
အဘယ်သူအားမျှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးလြှောကျလြှငျ, ရှိသည်ဟုပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာ, နောက်ဆုံးသောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလေ့လာမှုအတော်များများလူငယ်အမျိုးသားများအတွက်မကြုံစဖူး ED အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီ
စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ: ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း။ (2014) ED - ၃၃%
လုလင်တို့သည်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ။ (2012) ED - ၃၃%
အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013။ (2014) ထက်ပိုမို 2004 နှင့် 2013 အကြားနှစ်ဆနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထားများ
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်မှလိင်အတွေ့အကြုံရှိအလယ်တန်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝိသေသလက္ခဏာများ။ (2014) 16-21 တစ်နှစ်ကြားရှိ:
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - 27%
အနိမ့်လိင်ဆန္ဒ - ၂၄%
အော်ဂဇင်ပြနာများ - ၁၁%
ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှု porn-သွေးဆောင်အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့် anorgasmia အတူယောက်ျား၏တစ်ဦးအမှု-အစီရင်ခံစာပါရှိသည်။ သူက porn အတော်ကြာအမျိုးအစားများမှတဆင့်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်လိင်များအတွက်အနည်းငယ်သာဆန္ဒကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပုံမှန်လိင်စိတ်နဲ့ပျော်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတစ်ခု 8 လ reboot ခဲ။
လေ့လာ: က Man porn-သွေးဆောင်အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့် anorgasmia (2014) မှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ Reboot လုပ်သွား
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်များအတွက်ယခုအခါနီးပါးဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုယနေ့အချိန်၌ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောနုပျိုသော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်စွပ်စွဲနှေးကွေးသင့်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောလူငယ် ED သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ STD အခြေအနေ၊ ဆက်ဆံရေးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်မိမိ၏ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုစာရေးသူများမှန်ကန်သည်ဟုယူဆရန်နှေးကွေးခြင်းနှင့်နှေးကွေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုထက်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေသည်ဟုယူဆရပြီးငယ်ရွယ်သော ED ပြproblemsနာများသည်မကြာသေးမီကမှဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အစိုင်အခဲသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်ဟု porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ဘာသာရပ်အကြောင်းကိုအားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထုတ်ဝေရန်အရေးကွီး၏စဉ်တွင်, ဒီအထူးသဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအနီရောင်အလံတစ်ခုချုံဖုတ်ထစေ၏။ ဒီနေ့လူငယ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူတွေဟာပိုကောင်းတယ်။
ကိုမစာရေးသူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာကျင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဂျင်မ် Pfaus ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည် မိဘ နှင့် အစ်မ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောတဦးတည်း၏ဂျာနယ်များ။
နီကိုးလ် Prause ရဲ့ဟောင်းတ ဦး တွစ်တာဆောင်ပုဒ် သူမသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်လိုအပ်သောဘက်မလိုက်မှုကင်းမဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြု:
Prause တစ်ခု UCLA သို့မဟုတ်အခြားတက္ကသိုလ်များကအလုပ်မရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်သူမ၏ 2015 twitter ဆောင်ပုဒ်ဆန့်ကျင်။ အဘယ်သူမျှမရှည်တစ်ခုပညာသင်နှစ် Prause ရှိပါတယ် မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်စေ့စပ် သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Co-စာရေးဆရာ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်, တစ်ပြိုင်နက် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူလူပျိုတို့နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် libeling နေစဉ်။ ကြည့်ရှုပါ: ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9.
အတိတ်ကာလ၌, Prause သူမ၏လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ပတ်သက်။ ထူးခြားသောတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဤလေ့လာမှုအတွက်သူမအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်သော“ ဓာတ်ခွဲခန်းတုန့်ပြန်မှု” တို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟူသောလှည့်ဖြားသည့်တွစ်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမျိုးသားများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတာမှုများမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
စကားမစပ်သူမရဲ့ဒီလေ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ထုတ်ဝေထားသည့်တွစ်တာများတွင် ဦး ဆောင်ရေးသားသူကဒီအမျိုးသားတွေမှာ“ အိမ်မှာ ED ပြproblemsနာမရှိဘူး” လို့ပြောပါတယ်။ ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းပျမ်းမျှ erectile function ရမှတ်များသည်“ ပျော့ပျောင်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” အမျိုးအစားသို့ကျဆင်းသွားပြီးဆိုလိုသည်မှာသိသိသာသာသောအပိုင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကျိန်းသေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့, ယူဆရအိမ်မှာနဲ့ကြီးမားတဲ့မှာ။
Prause ၏ယခင်အလုပ်အချို့ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်မှုများခံခဲ့ရသည်။ သူမ၏လေ့လာမှုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ“လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ” ၂၀၁၃ (သံမဏိ, et al ။ ) ။ ငါးလသံမဏိ et al မီ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, Prause စိတ်ပညာရှင်မှ (သာ) ကဖြန့်ချိခဲ့သည် ဒါဝိဒ်သည် Leyချက်ချင်းအကြောင်းပေါ် blogged သူကို စိတ်ပညာယနေ့ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတာသက်သေပြဖို့ဖြစ်တယ်။ ထိုသို့သောပြောဆိုမှုများသည်အမှန်တကယ်လေ့လာမှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအမှန်တကယ်အထောက်အပံ့မပေးပါ။ အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခကပြောသည် ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်:
'' ဒီတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်စွဲအကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီသိသာတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အနုတ် P300 လွှဲခွင်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ P0.33 နှင့် (r = -300) တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒအကြားဆက်စပ်မှု, အနိမ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ဒီကိုတိုက်ရိုက်အဖြစ် P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင် မြင့်သော အလိုဆန္ဒ။ အခြားအစှဲလမျးသူအုပ်စုများမှမနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်မနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ သုတေသီများကရေးဆွဲအဆိုပါကောက်ချက်ဒုက္ခလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိသတင်းပို့သူတွေကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ကင်းသို့မဟုတ်စွဲတခြားမျိုးအလားတူဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပါသောအချက်အလက်များ, ကနေကွမ်တမ်ခုန်ဖြစ်ကြသည်။ '' ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ '' အမြင့်အလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကဲ့သို့ပင် Prause သည်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုစာနယ်ဇင်းသမားများအားတလွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမဆီမှ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး:
Prause: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများသတင်းပို့သူတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကနေအခြားအစွဲများကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏လေ့လာရေး, အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရုပ်ပုံများကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတသမတ်တည်းပုံစံကိုပြသကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တော့တစ်ဦးကခဲ့လျှင်လိင်နှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့သူတွေကို၌တူညီသောပုံစံကိုတွေ့မြင်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်း စွဲလမ်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုပုံတူကူးယူသည်ဆိုပါကဤတွေ့ရှိချက်လိင်၏ရှိပြီးသားသီအိုရီတစ်ခုအဓိကစိန်ခေါ်မှုကိုယ်စားပြုမယ်လို့ "စွဲ။ " ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တင်ပြအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်စွဲသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအခြားစွဲကဲ့သို့ပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးပြသထားတယ်။
အထက်ပါပြောဆိုချက်အရဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့တုန့်ပြန်မှုမရှိဟုမထောက်ခံပါ။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာပိုမိုမြင့်မားတဲ့ EEG (P300) ဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ စွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်သောအခါမျှော်လင့်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ကိုကင်းစွဲပေါ်မှာဤလေ့လာမှု) ။ အဆိုပါအောက်မှာမှတ်ချက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause အတူ အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်ကပြောပါတယ်:
သူမကသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မားစွာဖော်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိဟု Prause ၌ကျွန်ုပ်ထင်နေဆဲဖြစ်သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်သူတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။ အမှန်တကယ်ရလဒ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကောက်ချက်ကိုသူမည်သို့ကောက်ယူနိုင်မည်နည်း။ ”
၏ 8 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယခုရှိပါတယ် သံမဏိ et al ။ , 2013 အားလုံးသည် YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်: Steele et al ၏သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ။, 2013
နောက်ထပ်စိတ်ရှုပ်စရာပုံစံတစ်ခုမှာ SPAN Lab ၏လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်များသည်တွေ့ရှိချက်များကိုတိကျစွာမဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည် (2013)"
ရှင်းပြအဖြစ် ဒီဝေဖန်မှု, ဘယ်တော့လဲ အားလုံး အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI) မေးခွန်းများကိုသွင်းယူပေးခဲ့သည်, အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိခဲ့ SDI ရမှတ်များနှင့် EEG ဖတ်အကြား။ သေးအဖြစ် အခြားရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ ကရှင်းပြခဲ့သည်:
ထို့အပြင်စိတ္တဇတွင်ဖော်ပြထားသောနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် hypersexuality ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေမည့်အစားမြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအဖြစ်နားလည်ရန်အတွက်ဂယက်ရိုက်မှုများကိုဆွေးနွေးထားသည်။303] (စ။ 1) P300 လွှဲခွင်အဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့အလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းသောလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်စဉ်းစားရာအရပျထဲကပုံရသည်။ ဟီလ်တန် (2014) တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီတွေ့ရှိချက် [ "တိုက်ရိုက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင်"307] ။ "
တစ်ဦးကပိုပြီးတိကျမှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရပြီလို “ လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ SDI ရဲ့မေးခွန်းတွေကအပျက်သဘောဆောင်နေတယ်, တစ်ခုလုံးကို SDI နှင့်အတူမရှိသေးပါဆက်စပ်မှု။ "
"တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (2013) မှသူတို့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုအစီရင်ခံ "Hypersexuals" တွင် Emotion Dysregulation ၏အထောက်အထားမျှမ"
ရှင်းပြအဖြစ် ဒီဝေဖန်မှု, ခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်ဖုံးကွယ်။ အမှန်မှာ၊ “ hypersexuals” သည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ ဤသည်အများအပြားအဖြစ်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး porn စွဲထုံခံစားချက်တွေကိုသတင်းပို့ နှင့်စိတ်ခံစားမှု။ Prause ကသူမကို“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပိုမိုတုံ့ပြန်မှု” မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်ကိုအပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များထက် vanilla porn ကိုပိုမိုသဘောမကျသောကြောင့်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ပျင်းခဲ့ရတယ်။ ပိုမိုတိကျသောခေါင်းစဉ်မှာ -အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်သူဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ"။
"ကြည့်ရှုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု"
လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အစောပိုင်း၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Prause သည်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၊ အဲဒီအစားညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသူတစ်ယောက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီထက်ပိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးနောက်ရမှတ်များပိုမိုများပြားသည် ဒါကတ ဦး တည်းမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအရာဖြစ်တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အား porn မပါဘဲလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းများအကြောင်းဘာမှမပြောပါ။ ထိုသို့ erectile function ကိုအကြောင်းကိုဘာမျှမကပြောပါတယ်။ Prause ကသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်တယ် ဒေါက်တာ Isenberg ၏ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရပြီလို “ ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းကအမျိုးသားတွေကိုချိုစေတယ်။
ထို့နောက်သူသည်စာရေးဆရာ David Ley နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်းခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, သူသည်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်သုသေသနအာရုံကြောသိပ္ပံတွင်နောက်ခံမရှိသော - စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် -ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: အ "babyish စွဲ" မော်ဒယ်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ " ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဤနေရာတွင်ရေးသားသူများက“ အင်တာနက်သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုကြည့်ရှုခြင်းအား [ကြည့်ရှုခြင်း] တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိသေး” ဟူသောအံ့ propos ဖွယ်အဆိုပြုချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ တရားဝင်ချေပချက်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အလွတ်သဘောမဟုတ်သောဝေဖန်မှုကိုဤနေရာတွင်ကြည့်နိုင်သည်။ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose။ "
လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်ဂျင်မ် Pfaus ၏ရှေ့မှောက်တွင်နေသော်လည်းကျနော်တို့လျှင်၏အယ်ဒီတာများတွေးမိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ ဒီပွိုအလုပ်၏ရုပ်သိမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အနောက်တိုင်း erectile function ကို၏ပြဿနာမှဆီလျှော်ဖြစ်ပေါ်လာအများစုသောမေးခွန်းလွှာရလဒ်များကိုအကြားမေးခွန်းထုတ်စရာဆက်စပ်မှု, ပေါ်အခြေခံပြီးဖြေရှင်းဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မှတ်သားသင့်သည်မှာ Nicole Prause သည်သူမအား“ လိင်စွဲလမ်းမှု” နှင့် ပတ်သက်၍“ ကျွမ်းကျင်သော” သက်သေထွက်ဆိုချက်ကိုပေးသည်။ သူမဆီမှ Liberos website က:
Prause မှအကျိုးသူမ၏န်ဆောင်မှုရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည် ပြောဆိုထားသည် သူမ၏နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများ၏ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းစွဲကောက်ချက် (1, 2), သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်း:
Prause ရဲ့ 2013 EEG လေ့လာမှု တကယ်တော့ porn စွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မိသည့်အခါ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ခြင်း (P2013) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံများ (ဥပမာပုံများ) နှင့်ထိတွေ့မိပါကပိုမိုမြင့်မားသော P300 ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒနည်းပါးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ပိုမိုထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုများ (အင်တာနက်အပြာစွဲစွဲသူတစ် ဦး ၌မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်စိတ်ဆန္ဒနည်းပါးသည်) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစွဲ၏လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သေး, မီဒီယာ, Prause သူမ၏သုတေသနဟာစွဲအယူအဆ '' ပြိုကွဲ 'ခဲ့ပြောဆိုထားသည်။
အဆိုပါ ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု ၂၀၁၃ ဘာသာရပ်များ (ပေါင်းအနည်းငယ်) EEG ဖတ်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံရသည်။ မှန်ပါသည်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိပါ။ ၂၀၁၅ ရလဒ် - မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း vanilla porn ၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်သောအခါညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးသည် EEG spikes များပိုမိုများပြားသည်။ ညစ်ညမ်းမှုစွဲသူများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောနေရာတွင်ထိန်းချုပ်မှု၏ amplitude ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုနှိုးဆွမှုနည်းသည်။ သူတို့ဟာ desensitized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါချီးမွမ်း et al ။ နှင့်အတူperfectlyုံ aligns ရှာဖွေတာ Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), အရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါကပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (စွဲမဟုတျသူ) မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Robert Weiss LCSW & Stefanie Carnes၊ PhD မှ“ ED အပေါ်သုတေသနအသစ်နှင့်အချိန်နှင့်အမျှအသုံးပြုသောနာရီများ၏အပြည့်အဝမပါ ၀ င်သော”
Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နယူးလေ့လာမှုတစ်ခုဖယောင်းရုပ် Banana [အတုအသီး] ဖြစ်ပါတယ်